Wargeyska Ree Germany Ee Bild Oo Qiimayn Ku Sameeyay Xiddigaha Liverpool & Bayern Munich Ee Kulankii Xalay Iyo Qiimaynta Oo Ah Mid Dhinaca Saaraysa Bayern - GOOL24.NET
Wargeyska Ree Germany Ee Bild Oo Qiimayn Ku Sameeyay Xiddigaha Liverpool & Bayern Munich Ee Kulankii Xalay Iyo Qiimaynta Oo Ah Mid Dhinaca Saaraysa Bayern
Wargeyska kasoo baxa dalka Germany ee Bild ayaa sameeyay qiimaynta ciyaartoyda ee kulankii xalay dhex maray kooxaha Liverpool iyo Bayern Munich isaga oo u muuqday mid culayska saaraya kooxda ree England.
Xiddigaha Liverpool qaarkood ayaa la siiyay qiimayn aad u liidata kaddib bar-bardhacii goolal la’aanta ahaa ee Anfield ay labada dhinac ugu heshiiyeen kulanka lugta hore ee wareega 16-ka.
Dabcan Liverpool ayaa ahayd kooxda fursada cad cad helaysa iyadoo ay Sadio Mane iyo Joel Matip ku dhawaadeen goolka balse ay garaaci waayeen goolhaye Manuel Neuer.
Wargeyska ayaa si guud ahaaneed u wada qiimeeyay dhammaan xiddigaha kulanka kusoo bilawday iyo waliba macalimiinta balse qiimayntisa ayaan u badnayn mid wanaag ka sheegaysay Reds.
Nooca qiimaynta uu wargeysku isticmaalay ayaa ah mid caksi ah, Xiddigaha ugu qiimaynta wacan ayaa helay 1 halka darajada ugu liidata ay ahayd 6 waana in tiraba mida ay ka weyntahay ay ka qiimayn hoosayso.
Dabcan ma jiro ciyaartoy la siiyay darajada ugu hooseysa ee 6 balse Andrew Robertson iyo James Rodriguez ayaa helay min shan, Mohamed Salah, Wijnaldum, Lewandowski iyo Coman ayaa helay min afar halka xiddigaha Martinez iyo Hummels ay heleen darajada ugu sarreysa ee 1.
Halkan Kaga Boggo Qiimaynta Wargeyska Bild Ee Kulankii Anfield.